Instagram An’ny Filoha Tchetchen? · Global Voices teny Malagasy
Instagram An'ny Filoha Tchetchen?	Voadika ny 17 Febroary 2013 14:40 GMT
Zarao: Sarotra ny hahamarika ny kaonty Instagram an'i alihan777 amin'ny voalohany. Nahamarika ilay anaram-bositra tamin'ny alalan'ny siokan'ny namana ilay mpanentana malaza ao amin'ny fahitalavitra Rosiana Tina Kandelaki tamin'ny 8 Janoary 2013, saingy tsy nanome famantarana momba izay tompony.
Hatramin'ny voalohany, anefa , nibaribary fa na nohavaozin'ny filoha Chechen Ramzan Kadyrov, na ny mpampita vaovaony, na olona akaiky azy ilay rakitsary tsy fantatra anarana. Saika an'i Kadyrov manokana ireo sary nanaitra (jereo io ambony io, ilay mitafy karazana akanjo vy nenti-paharazana).
Mihoatra noho ny tena izy ny sasany tamin'ireo sary. Ohatra, hita ho tsy misangy amin'ny fiakanjoana tahaka ny mpanjaka (khan) avy ao Azia Afovoany, miaraka amin'ny zanaka tigra mameno azy i Kadyrov, ilay voampanga matetika amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny fanaovana jadona. Na dia izany aza, tsy nitantara ny zava-niseho RuNet raha tsy tamin'ny herinandro taoriana, taorian'ireo sioka [ru] vitsy [ru] raha voamarik'ilay bilaogera momba ny kolontsaina Corpuscula monina ao St. Petersburg, izay nampita an-tserasera ny sasany tamin'ireo sary tamin'ny 15 Janoary, sy nanontany izay naka ny sary[ru].
Ny andro manaraka, Marina Litvinovich, mpikatroka zon'olombelona sy manampahaizana manokana momba ny fifandraisana teo aloha, dia nibilaogy momba ilay kaonty ihany koa, ka vao maika nampalaza azy kokoa. Nanatsonga sary maromaro tamim-panebahana i Litvinovich, sary ahitana an'i Ramzan Kadyrov mankafy ny ambanivohitra ao Tchetcheni miaraka amin'i Vladislav Surkov sy ny vadin'i Surkov.
Sokajiana ho lehiben'ny fandalinan-kevitra mandritra ny fitondran'i Putin i Surkov, izay Tchetchen ara-poko. Taorian'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny taona 2011, nomena minisitera tsy dia mahasarika izy ka niheveran'ny sasany fa fanilihana azy mangingina izany. Taorian'ny nandalovany vetivety tamin'ny maha-Praiminisitra lefitra azy dia efa nitantana ny sampandraharaham-panjakana i Surkov ankehitriny, rafitra misahana ny fanohanana sy fanampiana ny governemanta Rosiana (ny minisitera) — toerana izay notazonin'ny ben'ny tanànan'i Moskoa Sergey Sobyanin teo aloha.
Angamba satria nahasarika olona betsaka ilay sary, dia nanjary voatokana tsy naseho ny rehetra [ru] ilay kaonty, saingy niverina ihany taty aoriana. Angamba tsy nahazoazo aina i Kadyrov tany am-boalohany — na izany aza, vao faramparany izy no nanatevin-daharana ny tontolon'ny bilaogy-madinika, nanomboka nampiasa kaonty Twitter izy nandritra ny fahavaratra tamin'ny taona 2012 (tamin'ny 20 Jiona ny sioka voalohany nalefany @RKadyrov [ru]). Nanomboka tamin'izany, indraindray voafitaky ny kaonty @kadirovrussia [ru] ny bilaogera, kaonty hosoka be vazivazy sy mazoto nanomboka tamin'ny 2011. Na dia mora mankaleo hatrany aza ireo filazana ofisialy amin'ny siokan'i Kadyrov, ny kaonty Instagram alihan777 (nanomboka tamin'ny volana Novambra 2012) no nampiaka-danja azy.
I Kadyrov ihany ve no mampiasa ilay kaonty? Sy mandefa rohy ny sariny manokana, Surkov, ary ny Praiminisitra Medvedev ao amin'ny Twitter-ny, toa mitodika amin'olon-kafa [ru] i Kadyrov:
Вот такую фотку нашел у @alihan777 instagram.com/p/VMjbDKr5_K
Jereo ity sary hitako ity @alihan777 instagram.com/p/VMjbDKr5_K/
А это стихи Омара Хайяма, которые я подарила @alihan777. Он очень любит поэзию и прекрасно декламирует. Надеюсь, в #железныеледи уговорить его прочитать что-нибудь из Хайяма #нтв #железныеледи
A photo posted by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on Feb 2, 2013 at 1:05pm PST
Na dia izany aza, na dia tsy nampafantarin'i Kadyrov ampahibemaso aza fa izy no alihan777, fantatra fa mety tena izy tokoa io. Izany hoe, raha matoky an'i Tina Kandelaki isika, izay [ru] nifandray [ru] tamin’i alihan777 hatramin'ny niverenany tamin'ny fitsidihany vao haingana tany Chechnya. Mampiseho mazava, fa amin'ny sariny manokana amin'ny Instagram miaraka amin'i Kadyrov (jereo ato ambony), mampitaha [ru] ny tenany amin'i alihan777 izy:
@alihan777 считает, что сейчас правильно инвестировать в бонды и технологии. Очень ему нравится кейс Инстаграма, но считает, что покупать рано
Mihevitra i @alihan777 fa fotoana hampanjariana ny adidy sy ny teknolojia izao. Tena ankafiziny ny Instagram, saingy mihevitra izy fa mbola aloha be loatra raha hividy
Nanamafy ny fametrahana ny filaminana efa natomboky ny rainy Ahmat i Kadyrov, izay nandany ny ankamaroan'ny fotoanany tamin'ny fitantanana an'i Chechnya, ary matetika mampiseho fahamatorana ivelany amin'ireo sary. Amin'izany, toa manaraka ny dian'ilay mpanoro hevitra azy ankafiziny izy, dia i Vladimir Putin. Indraindray, mampiseho ny maha-mpivavaka azy izy. Ohatra, ny sary voalohan'ny ao amin'ny fitehirizan-tsarin'i alihan777 dia ahitana sangam-bolo tahaka ny volon'ny Mpminany Mohammad [ru], naranty tao Abu Dhabi. Ankoatra ny fivavahany sy ny fanenjehana ireo mpiady anaty akata Wahhabi ao an-tendrombohitry Tchechenia, toa izao raha tsy ampilaharina ny zavatra ankafizin'i Kadyrov:
Ary ny mpilalao sarimihetsika tsy dia tanora.
Mbola feno sary eto [ru] (tsy hita indray nandritra ny fotoanan'ny fandikan-teny -jereo ny teny anglisy na frantsay raha tsy mivoaka ny sary).
Tantaran'ny Eoropa Afovoany & Atsinanana farany 4 ora izayMakedoniaAnkizy vavikely Makedoniana Maty Teo Am-piandrasana Ny Fitokanana Ny Toeram-pitsaboana
3 andro izayRosiaIndizena Mpiompy Diera, Tezitra Amin'ny Goavan'ny Solika Ao Siberia
Soratra miverina: TSY Nankany Okraina Ny Mpanao Didijadona Tsetsenina Sy Ilay Nasionalista Rosiana · Global Voices teny Malagasy	[…] ampiasainy izany handrohizany amin'ny sehatry ny tambajotra antserasera ankafiziny kokoa, Instagram [tatitra Global Voices amin'ny teny […]
01 Marsa 2014, 22:39	Ajanony ihany
Vakio amin'ny teny Français, Español, Magyar, Italiano, English
HehyMedia sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaPolitikaSaripikaAkon'ny RuNet
Tweet Tantara Malaza Indrindra Manerantany 23 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaLAHATSARY: Herisetran'ny Polisy Libaney Tamin'ireo Mpanao Fihetsiketsehana “Maimbo Ianareo (You Stink)”
Tahiry isam-bolana Aogositra 2015 130 Lahatsoratra